Faritra Mosko - magazine "Potato System"
Tena Label Faritra Moskoa
Label: Faritra Moskoa
Ny minisitry ny fambolena sy ny sakafo ao amin'ny Faritra Moskoa Sergei Voskresensky tamin'ny fivoriana nataon'ny governoran'ny faritra Andrei Vorobyov niaraka tamin'ny minisitra sy ...
Koba eo amin'ny 43 taonina no nojinjaina tao amin'ny faritra Moskoa
Ireo mpamokatra fambolena any amin'ny faritr'i Moskoa dia mijinja laisoa mavitrika, efa nanangona sahabo ho 43 taonina. Ny orinasam-pambolena ao amin'ny faritra Moskoa dia nanomboka mamatsy laisoa vaovao ...
Ny 50% amin'ny fijinjana legioma dia efa nojinjaina ao amin'ny distrikan'i Dmitrovsky any amin'ny faritr'i Moskoa
Ny legioma dia jinjaina mavitrika ao amin'ny Distrikan'i Dmitrovsky any amin'ny Faritra Moskoa. Ovy 66 taonina mahery no efa voangona. Raha fintinina dia namboly orinasa mpamboly any amin'ny distrika ...
Ny seti-tongolo no nojinjaina tao amin'ny faritra Moskoa
Vita ny fanangonam-bokatra tongolo ao amin'ny fambolena "Lukamore" sy "Ozyory" ao amin'ny distrikan'ny tanànan'ny Ozyory ao amin'ny faritr'i Moskoa. Maherin'ny 100 hekitara no nakarina, izany hoe ...
Mitohy ny fijinjana ovy any amin'ny faritra Moskoa
Eo amin'ny sehatry ny faritr'i Moskoa dia natomboka ny fanangonam-bokatra betsaka ny ovy, hoy ny tatitra nataon'ny minisiteran'ny Fambolena sy ny Sakafo ao amin'ny Faritra Moskoa. “Amin'ny fambolena ...
Any Kazan, niresaka momba ny mety hisian ny fambolena ozinina amam-bary amin'ny faritra Arsk
Ireo tantsaha astrakhan dia voatery mivarotra vokatra fatiantoka